Madaxweynaha Mareykanka oo Sucuudiga ku tagay safarkiisii ugu horeeyay dalka dibadiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha Mareykanka oo Sucuudiga ku tagay safarkiisii ugu horeeyay dalka dibadiisa
May 20, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Mareykanka oo Sucuudiga ku tagay safarkiisii ugu horeeyay dalka dibadiisa. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Riyadh-(Puntland Mirror) Madaxweyanaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Sabti ah wadanka Sucuudi Caraabiya ku tagay safarkiisii ugu horeeyay oo dalka dibadiisa ah tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Janaayo.
Donald Trump ayaa waxaa garonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Boqorka Sucuudiga Salmaan .
Labada hoggaamiye ayaa la filayaa in yeeshaan kulan maanta gelinka dambe si ay uga wadaxaajoodaan xiriirka ka dhaxeeya iyo si lamid ah arrimaha gobolka iyo kuwa caalamka kale.
Madaxweyne Trump ayaa ka qeybgali doona shir-weynaha Khaliijka Carabta iyo hoggaamiyaasha Islaamka inta uu ku guda jiro booqashadiisa Boqortooyada Sucuudiga.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyihii ciidanka ammaanka garoonka diyaaradaha Gaalkacyo iyo mid kamid ah waardiyihiisa ayaa waxaa maanta oo Isniin ah magaalada Gaalkacyo ku dilay askari katirsan ciidamada Puntland, sida ay ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah ay u [...]